महाधिवेशन – Himalaya Television
आठौं महाधिवेशनमा प्रचण्डको प्रतिवेदनः नयाँ बोत्तलमा पुरानै रक्सी (भिडियो रिपोर्टसहित)
१७ पुस २०७८ काठमाडौं । ‘नयाँ बोतलमा पुरानो मदिरा’ भने जस्तै माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक दस्तावेज विगत जस्तै थन्किनेछ । कमजोरी स्वीकार गर्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने प्रचण्ड प्रवृत्तिमा खासै भिन्नता आउने छैन । गत वर्ष नेकपा...
१७ पुस २०७८ काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका प्रमुख विष्णुपुकार श्रेष्ठका अनुसार कूल एक हजार ७४२ मतदाताको नामावली सार्वजनिक गरिएको हो । नामावलीमा आयोजक समिति, विभिन्न...
१६ पुस २०७८ काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन शनिबारसम्म लम्बिएको छ । आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक प्रस्ताव पारित भए पनि विधान मस्यौदा पारित भएको छैन । सो विधान मस्यौदा पारित गर्नका लागि...
माओवादी महाधिवेशन दुई दिन लम्बियो, आज पनि विभिन्न समूहको प्रस्तुती जारी रहने
१५ पुस २०७८ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन कम्तीमा दुई दिन लम्बिने भएको छ । आइतबार उद्घाटन हुँदा आजसम्म महाधिवेशन सकिने भनिएकोमा अहिलेसम्म राजनीतिक प्रतिवेदनलाई नै पास गरिएको छैन । करिव १७ सय प्रतिनिधिलाई २५ समूहमा विभाजन गरेर...
माओवादी महाधिवेशन: के छ प्रतिवेदनमा राम्रा कुरा ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१३ पुस २०७८ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आइतबारदेखि जारी छ। महाधिवेशनमा सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि २५ समूह बनाएर छलफल चलिरहेको छ। समूहगत छलफल गरेका केही प्रतिनिधीलाई हामीले प्रतिवेदनमा राम्रा कुरा...
माओवादी महाधिवेशनमा कार्कीले किन पेस गरे पूरक प्रस्ताव ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१३ पुस २०७८ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले महाधिवेशनमा पूरक प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गरेको दस्तावेजमा केही कुरा अस्पष्ट भएको भन्दै कार्कीले केही पूरक र केही नवीन धारणासहितको प्रस्ताव पेस...
माओवादी महाधिवेशन : प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल(भिडियो रिपोर्टसहित)
१२ पुस २०७८ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको काठमाडौंमा जारी आठौं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले पेश गरेको विधान मस्यौदा पेश भएको छ । २५ समूह बनाएर प्रतिवेदनमा छलफल...
माओवादी महाधिवेशनः बन्दसत्र सञ्चालनका लागि अध्यक्ष मण्डल चयन
१२ पुस २०७८ काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले महाधिवेशनको बन्दसत्र सञ्चालनका लागि सात सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल चयन गरेको छ । अध्यक्ष मण्डलको चयनसँगै बन्दसत्रको कार्यक्रम सुरु भएको माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केही थप प्रतिनिधिको बारेमा...
माओवादी महाधिवेशनअन्तर्गत आज बन्दसत्र शुरु हुँदै
१२ पुस २०७८ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन अन्तर्गत आज बन्दशत्र शुरू हुँदैछ । बिहान ११ बजेदेखि प्रज्ञा भवनमा शुरु हुने बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । प्रचण्डले प्रस्तुत गर्ने ु२१औँ...